'नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? ' - Asian Samachar
‘नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? ‘
Asian Samachar बिहिबार, पुस ७, २०७३ (11 months ago) बिचित्र, स्वास्थ्य
निन्द्रामा नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? या कुनै पनि कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहनु भएको छैन ? त्यसो भए सावधान हुनुहोस् । यस्तो छ भने तपाईंलाई मानसिक रोग ‘पोष्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिस्अर्डर (पीटीएसडी)’ को शिकार हुनु भएको हुन सक्छ ।
मनोवैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘यो रोगबाट पीडित मानिसमा चिडचिडाहट हुने र सानो कुरामा पनि रिसाउने हुन्छ । यो यस्तो समस्या हो, जहाँ अतितका घटनाहरु वर्तमानमा प्रतिक्रिया दिन्छन् ।’ अनुसन्धानका अनुसार बाल्यकालमा मनमा आघात या पारिवारिक तनावले पीटीएसडी हुने सम्भावना बढाउँछ ।
यौन दुव्र्यवहार, युद्ध अवस्था, सडक दुर्घटनाजस्ता घटनाबाट पनि यस खालको मानसिक समस्या सिर्जना हुन्छ । कहिलकाही यस्तो समस्या भएका मानिसले आत्महत्याको सहारा पनि लिन सक्छन् ।
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (कग्निटिभ बिहेबरल थेरापी) : यो एक वैज्ञानिक वार्तालापको विधि हो । यसमा दर्दनाक घटनाबाट उत्पन्न गलत सोचका बारेमा पीडितसंग कुराकानी गरिन्छ ।
आघात केन्द्रित विधि : यो विधि पीडितलाई आघातसम्बन्धी कुराकानी गर्न लगाएर चिन्ता हटाउने प्रयास गरिन्छ ।
चिकित्सकको औंला देखाएर कुरा गर्ने विधि : यसअन्तर्गत पीडितलाई चिकित्सकको औंला देखाएर आघातका बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । यसबाट पीडितको लक्षणमा सुधार सम्भव हुने मानिन्छ । पीटीएसडीको उपचारमा यो सबैभन्दा उपयोगी तरिका हो । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
प्रहरी अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवा सुरु
यस्ता छन् भुँइकटहर खानुका फाइदा
स्वास्थ्य बिमामा के–के सेवा लिन पाइन्छ ?